လွတ်လပ်ရေး ခေတ်ဦးကာလ မြန်မာ မွတ်စလင်မ်တို့၏ လွတ်လပ်ရေးနေ့ အပေါ်အမြင် | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ကမ္ဘာအလင်း စာစောင် (၉ ကြိမ်မြောက်လွတ်လပ်ရေး အထူးထုတ်)
လွတ်လပ်ရေးနှင့် ကျွန်ုပ်အတွေး (အီစာထွန်းအောင်)
ဒို့ပြေ … ဒို့မြေ
ပြည်ထောင်စုအမွေ … အမြဲတည်တန့်ပေ
ထိန်းသိမ်းစို့လေ … ။
ကျွန်ုပ်မွတ်စလင်မ်သည် ဤသီချင်းကိုစိတ်ပါလက်ပါ သီကျုးခဲ့သည်။ ယခုလည်း သီဆိုလျက်ပင်။
သီချင်းတွင် သစ္စာတိုင်သောအဓိပ္ပါယ်တို့နှင့်လည်း ပြည့်ဝနေပေသည်။ ထိုသို့ သစ္စာတိုင်ခြင်းနှင့်အညီလည်း ကျွန်ုပ် မွတ်စလင်မ်သည် သစ္စာတည်တန့်ခဲ့သည်။ တကယ်တော့ ကျွန်ုပ်သည်ကား ဗမာသာလျှင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ဗမာတစ်ယောက်တွင် ရှိသင့်ရှိအပ်သော သစ္စာတရားတို့ကို ထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။ ထိုနည်းတူစွာပင် ဗမာတစ်ယောက်၏ ရသင့်ရထိုက်သော တရားမျှတ “လွတ်လပ်ခြင်း အခွင့်တူညီမှု” စသော ပြည်သားတိုင်း၏ အခွင့်အရေးကိုလည်း ကျွန်ုပ် မွတ်စလင်မ်သည် လိုလားသည် တောင့်တသည်၊ ကျွန်ုပ်သည် ဗမာသာလျှင် ဖြစ်သည်။ ဗမာသည် ဗမာပြည်၏ အခွင့်အရေးများနှင့် ပေါင်းစပ်ကာ ပြည့်ဝသော အရည်အချင်းရှိသည့် ဗမာသာလျှင် ဖြစ်သင့်သလို ကျွန်ုပ် မွတ်စလင်မ် (၀ါ) ဗမာတစ်ယောက်အဖို့လည်း ယင်းသည် အခွင့်အရေးများနှင့် ပေါင်းစပ်ကာ ပြည့်ဝသော မွတ်စလင်မ် တစ်ယောက် ဖြစ်လိုပေသည်။
ပြည့်သစ္စာကို ရိုသေစောင့်တည်ခဲ့သော ကျွန်ုပ်တို့ ဘိုးဘွားများကို ကျွန်ုပ်သည် မျှော်မှန်းမိသည်။
၁။ မင်းကြီးမဟာ မင်းလှကျော် (၀ါ) ဦးဒွန်းသည် နေပြည်တော်ရှိ အိန္ဒိယပြည်သား လူအမျိုးမျိုးနှင့် ဗမာပြည်ဖွား မွတ်စလင်မ်များအပေါ်တွင် ခန့်အပ်ထားသောဝန်ကြီးဖြစ်သည်။ ဘုရင့်သစ္စာတော်ကို မှန်ကန်စွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့သဖြင့် ၀န်၏ အဆောင်အယောင် အစီးအနင်းများကို သနားတော်မူခြင်းခံရသည့်ပြင် ဆင်စီး၍ ရွှေထီး ၂-လက် ဆောင်းရသည်။
၂။ အကောက်တော်ဝန် ကျောက်ရဲမြို့စား မွလ္လာအစ်(စ်)မာအီလ်သည် ဘုရင်မင်းမြတ်၏ ချစ်မြတ်နိုးခြင်းခံရသလို၊ အလှူကောင်းမှုများစွာပြုသည်။ စူရတီဗလီကြီးကို ခမ်းနားတင့်တယ်စွာ ဆောက်တည်ခဲ့သူ ဗလီတကာလည်း ဖြစ်သည်။ ၀န်မင်းရာထူးနှင့် အထိုက်အလျောက် ချီးမြှင့်ခြင်းခံရသည်။ အင်္ဂလိပ်များ မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းကို သိမ်းယူသောအခါ ခါန်ဘဟာဒူရ်ဘွဲ့ကို ချီးမြှင့်ခြင်းခံရပြန်သည်။
၃။ ဦးဘိုးမြမှာ ဘုရင်စီးတော်မူသည့် သဘောင်္ာတော်၏ ကပ္ပီတန်ဖြစ်ပြီး မြန်မာမွတ်စလင်မ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကပ္ပီတန်အလုပ်၌ ကျွမ်းကျင်သဖြင့် ဘုရင်၏ ချစ်မြတ်နိုခြင်း ခံရသည်။
၄။ (က) ဗိုလ်မင်းဦးနှစ် (ခ) စကြာအမြောက်တပ်ဗိုလ် ဦဟာရှင် (ဂ) မဂ်လာအမြောက် ဘုန်းအိုးဗိုလ် ဦးယောက် (ဃ) အမြောက်တပ်သွေးသောက်ကြီး ဦးဆိုးတို့မှာ မြန်မာမွတ်စလင်မ်များဖြစ်ကြသည်။
အမြောက်တပ်ဗိုလ်မှူးကြီး သွေးသောက်ကြီးများဖြစ်ကြ၍ ဘုရင်မင်းမြတ် သဒ္ဓါယုံကြည်ခြင်းကို ခံရသည်။ ဗိုလ်မှူးများ၏ အစီးအနင်း အယောင်အဆောင်များ ရရှိသည်။ ရွှေထီးဆောင်းရသူများဖြစ်သည်။ ဘုရင်မင်းမြတ်၏ အမိန့်တော်ကို ဦးလည်မသုံ ထမ်းရွက်ခဲ့ပြီး မြန်မာပြည်အပေါ် သစ္စာစောင့်တည်ခဲ့သော ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘိုးဘွားများပင် ဖြစ်ပေသည်။
ဒီကနေ့ မျက်မှောက်မှာလည်း ကျွန်ုပ်တို့ မွတ်စလင်မ်ဗမာများသည် ကုန်းတပ်၊ ရေတပ်၊ လေတပ်များတွင် ၀င်ရောက်ကာ ပြည်သူ့သစ္စာကို စောင့်တည်နေကြသည်။
ကိုကြီးနု ပြောသကဲ့သို့ ချောက်ထဲကျရန် လက်နှစ်လုံးလောက်သာ လိုတော့သော ဗမာပြည်အပေါ်တွင်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ မွတ်စလင်မ်ဗမာများသည် သစ္စာ စောင့်ထိန်းခဲ့ပါ၏။ ဤကား ရာဇ၀င်က သက်သေခံပါလိမ့်မည်။
“ပြည်ထောင်စုအမွေ အမြဲတည်တန့်ပေ ထိန်းသိမ်းစို့လေ” ယင်းသည့်အပိုဒ်ကို ကျွန်ုပ်မွတ်စလင်မ်ဗမာသည် လှိုက်လှဲစွာ သီဆိုသကဲ့သို့ပင် သစ္စာရှိစွာနှင့်လည်း လက်တွေ့ပြုမူဆောင်ရွက်ခဲ့လေပြီ။ ရာဇ၀င်သည် နောင်တခေတ်တွင် သက်သေခံမည်ကား မငြင်းကွယ်နိုင်ပေ။
ယင်းသည့် အပိုဒ်များကိုလည်း ကျွန်ုပ်ဗမာမွတ်စလင်သည် လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ သီဆိုခဲ့ပြီ သီဆိုနေပေလိမ့်ဦးမည်။ သို့ သီဆိုခဲ့သလိုပင် ယင်းသည့် အခွင့်အရေးများကိုလည်း လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ခံစားရပေမည်။
လွတ်လပ်ရေးသည် ရောက်လာလေပြီ။ ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက်မှ ပြည်သူနှင့်တိုင်းပြည်အပေါ်တွင် သစ္စာစောင့်သိလာခဲ့သော ကျွန်ုပ်တို့ ဗမာမွတ်စလင်မ်ကား လွတ်လပ်ရေး ကြံ့ခိုင်တည်မြဲမှုကို မျှော်မှန်းအားထားလျက် ရှိပေသည်။
ကျွန်ုပ်မွတ်စလင်မ် ဗမာသည် သီဆိုလျက်ရှိနေသည်။
ကမ္ဘာ … မကျေ … မဗာပြေ
ဒါတိုပြေ … ဒါတို့မြေ … ဒို့ပိုင်တဲ့မြေ …
ဒို့ပြေ … ဒို့မြေ …
photo- Ko Zaw Tun FB
This entry was posted on January 5, 2013, in နိုင်ငံရေး. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ဗိုလ်မှုးဘရှင် ၉၈ နှစ်မြောက် ကျင်းပမည့် ရက် အတည်ဖြစ်
မတရားဖမ်းဆီး ခံရသော ကိုဖြိုးဝေအောင် ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ.. →